2x05 Podcast: Microsoft News iyo Afar Sano oo aan Steve Jobs Laheyn | Wararka IPhone
2 × 05 Podcast: Wararka Microsoft iyo afar sano la'aan Steve Jobs
Qayb cusub oo ka mid ah barnaamijkeenna toddobaadlaha ah kaas oo Waxaan falanqeyneynaa wararka ay Microsoft soo bandhigtay, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo barnaamijka cusub ee 'Surface Pro 4' iyo 'Surface Book', laba qalab oo loo sii daayay inay si toos ah ula tartamaan Apple's iPad Pro iyo MacBook. Waxaan sidoo kale ka hadleynaa isbeddelada ka dhacay Apple muddadaa afarta ah ee Steve Jobs uusan ka sii shaqeynaynin shirkadda. Fikradaha ku saabsan El Capitan, sii qabsashada iphone-yada cusub iyo kuwo kaloo badan ayaa sidoo kale boos ku leh podcast-kan.
Dhegeyso »2 × 05: Wararka Microsoft iyo 4 sano oo aan lahayn Steve Jobs» Spreaker.
Nacho (@nastiolo), tifaftiraha Actualidad iPad, Actualidad iPhone iyo Actualidad Gadget
Luis (@luispadillablog), iskuduwaha Actualidad iPad iyo tifaftiraha Actualidad iPhone
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 2 × 05 Podcast: Wararka Microsoft iyo afar sano la'aan Steve Jobs
Hermès Edition Apple Watch Daawashada [VIDEO]
Sida loo galiyo fayl gudaha galalka iOS 9